Haisoratra (L) sy siansa (S): hapetraka amin’ny kilasy 2nde ny fisafidianana ny sokajy | NewsMada
Haisoratra (L) sy siansa (S): hapetraka amin’ny kilasy 2nde ny fisafidianana ny sokajy
Manomboka amin’ity taom-pianarana 2018-2019 ity ny fanavaozana ny rafi-pampianarana miaraka amin’ny teti-pivoarana ho an’ny fanabeazana, hatramin’ny taona 2021. Tafiditra amin’izany, ho an’ny ambaratonga fahatelo amin’ny kilasy 2nde , ny fisafidianana ny sokajy L havanana amin’ny Haisoratra sy S ho an’ny mahafehy ny Siansa. Teo aloha, any amin’ny kilasy 1ère vao misafidy ny sokajy ary mbola ny sokajy A-C-D. Ankoatra izay, hampidirina anaty safidy koa ny fitantanana, orinasa, toekarena (OSE) ahafahany mamantatra sahady ny sehatrasa idirany, any aoriana. Efa nankatoavina, ny herinandro lasa teo, nandritra ny atrikasa niarahan’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena sy ny mpanohana teknika ary ny tomponandraikitry ny sekoly tsy miankina amin’ny fanjakana.
Hisy fanavaozana koa ny fandaharam-pianarana ka hampidirina ho taranja manokana any an-dakilasy ny fanabeazana ho olom-pirenena ao amijn’ny kilasy 2nde. Manampy izany, ny taranja informatika hifehezan’ny mpianatra ny fikirakirana ny teknolojia vaovao. Taranja fahatelo ny siansa momba ny toekerana sy ny sosialy (SES) hatomboka amin’ny sekoly miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana vitsivitsy ho andrana. Hahazo fiofanana mialoha ny hampiharana ny fanavaozana ireo mpampianatra.
Fanofanana ho an’ny mpanabe
Momba ny fiofanana ihany, hofanina ny mpanabe amin’ny kilasy T1 sy T2, mahatratra 27 700 amin’ny fampianarana ny taranja vakiteny, soratra, malgasy, français ary ny matématika. Efa misy koa ny vata manokana ho an’ny mpampianatra 6 000 amin’ny kilasy T3 sy T5 ho an’ny fampianarana ny taranja matématika sy français. Fanofanana fahatelo, ny fanitarana ny fampianarana ampitain-davitra ho an’ny mpanabe 3 500 eny amin’ny ambaratonga voalohany.